Afọ ise n'ụlọ mkpọrọ German maka asambodo COVID-19 adịgboroja
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Afọ ise n'ụlọ mkpọrọ German maka asambodo COVID-19 adịgboroja
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Afọ ise n'ụlọ mkpọrọ German maka asambodo COVID-19 adịgboroja.
Nrụpụta na ire asambodo COVID-19 adịgboroja abụrụla ụlọ ọrụ ojii na-eto eto na Germany.
Ọnụọgụ COVID-19 na Berlin ruru ọkwa kachasị elu na Thursday gara aga, yana ikpe ọhụrụ 2,874 kọrọ ụbọchị ahụ.
Ndị omeiwu German ga-ekpebi iwu mgbochi COVID-19 ọhụrụ na Tọzdee a.
Malite na Mọnde, ịnwe ma ọ bụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ma ọ bụ asambodo mgbake bụ ihe dị mkpa ịbanye n'ụlọ nri, sinima, ụlọ ihe nkiri, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ebe a na-egwu mmiri, ebe igwu mmiri, gyms, yana ndị na-edozi ntutu na ebe a na-asa ahụ mara mma na Berlin.
Edebere Bundestag (Nzuko omeiwu German) na iwu mgbochi mgbochi COVID-19 ọhụrụ echi, n'agbanyeghị na ewebatalarị usoro mgbasa ozi.
Ka gọọmentị mmekorita nke Germany ga-eme n'ọdịnihu na-achọ imechi ihe mgbochi na ọrịa a, ndị mmadụ na-arụpụta ma na-ama ụma na-eji. asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa adịgboroja COVID-19 nwere ike chere ihu ihe ruru afọ ise n'ụlọ mkpọrọ.
Nsonaazụ nnwale COVID-19 adịgboroja na asambodo mgbake coronavirus ga-adaba n'otu ụdị mpụ, yana ntaramahụhụ yiri ya maka ndị adịgboroja na ndị ji ya.
Ihe niile echere na iwu ọhụrụ a bụ ndị Social Democrats, yana ndị Free Democratic na Green Parties. Ndị otu atọ a nọ ugbu a na mkparịta ụka mmekorita ma na-atụ anya iguzobe ọchịchị German ọhụrụ n'isi izu na-abịa.
Nrụpụta na ire asambodo COVID-19 adịgboroja abụrụla ụlọ ọrụ ojii na-eto eto na Germany. N’otu n’otu ikpe dị otú ahụ nke Der Spiegel kọrọ ná ngwụsị October, otu onye adịgboroja na-arụ ọrụ n’otu ụlọ ahịa ọgwụ dị na Munich na onye so ya rụpụtara ihe karịrị 500. asambodo dijitalụ adịgboroja N'ime otu ọnwa, na-akwụ ụgwọ na € 350 maka onye ọ bụla rere.
Ka ọ dịgodị, Berlin Ndị ọchịchị obodo na-eme atụmatụ ịkwalite mmachi na isi obodo German, ebe malite na Mọnde, ịnwe ma ọ bụ ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ akwụkwọ mgbake bụ ihe dị mkpa ịbanye n'ụlọ nri, sinima, ụlọ ihe nkiri, ebe ngosi ihe mgbe ochie, veranda, ebe igwu mmiri, gyms, yana ndị na-edozi isi. na mma salons.
Na tusde, Berlin Onye isi obodo Michael Müller kwuputara na ndị ọchịchị obodo chọrọ “inwe ngwa mgbakwunye” iji gbochie mgbasa nke COVID-19.
Agbanyeghị, onye isi obodo jụrụ ịkọwapụta ihe usoro ọhụrụ a ga-abụ.
Ndị mgbasa ozi mpaghara na-eche na malite n'izu na-abịa, na mgbakwunye na ihe a chọrọ iji nweta ọgwụ mgbochi ma ọ bụ akwụkwọ mgbake iji banye n'ebe ọha na eze, ndị nọ n'ime ebe a na-eme egwuregwu ga-achọkwa ịme ihe na-eme ka ọha na eze na-eyi ihe mkpuchi, ma ọ bụ nwee nsonaazụ ule na-adịghị mma na nso nso a.
Iwu obodo ọhụrụ na mmachi na-abịa mgbe ọnụọgụ COVID-19 batara Berlin dara ọkwa kachasị elu na Thursday gara aga, yana ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ 2,874 kọrọ ụbọchị ahụ.
November 18, 2021 na 04: 56
Imepụta na ire asambodo COVID-19 adịgboroja abụrụla ụlọ ọrụ ojii na-eto eto na Germany. Ndị uwe ojii German ewepụtala otu pụrụ iche iji buso ahịa ojii na-eto eto na asambodo ọgwụ mgbochi adịgboroja ọgụ. Nke ahụ bụ Europol, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke European Union kwuru.